Chigadzirwa Chigadzirwa: Ruvara rweCeramic Mugs
Unyanzvi: 365 ml
Kukura: 12.5 * 9.5 cm
Ruvara: chena matte, nhema matte, tsvuku matte, nezvimwe
Mutengo: USD1.6-USD2.5 / PC
Zvimiro: Maka mukombe unoshandiswa semukombe wemvura, mukaka, kofi uye mumwe mubato wakakombama. Inonzwa kunge yakasununguka kushandisa. Mhando mbiri dzekapu LIDS dzinogona kupihwa zvakasununguka neyekutanga zvedongo zvedongo LIDS, izvo zvinoita kuti inzwe ichiwedzera kunaka.
pasi peiyo isina-kutsemuka dhizaini dhizaini dhizaini yakanaka inogona kuve anti inopisa retro maitiro
Mukombe wekofi unogadzirwa nekutsvina isina kunaka ion poda, tourmaline, yepamusoro ivhu uye zvimwe zvakakosha zvinhu. Iko kukwirisa kwakanyanya kweasina kunaka ions akaburitswa neiyo yepamusoro kofi kofi inogona kuita electrolyze mvura, kuburitsa zvisina kunaka yakadhayiswa hydroxide ions, kuita macromolecular mapoka ari mumvura ari madiki, uye kunatsiridza kusviba kwemvura uye kupinda mukati. Naizvozvo, iyo yekunwa mvura mukapu yekofi ine simba rakasimba rekunyungudutsa chinwiwa, uye chinwiwa chinwiwa chiri nani. Dururira mvura mukapu yekofi kuti uwedzere chiitiko chemvura, gadzirisa kuchengetedzwa kwemuviri wemunhu, gadzirisa yin uye yang yang yemuviri, kusimudzira metabolism, kugadzirisa hutachiona hwevanhu, uye kuve nehutano hwakanaka hwekurapa uye hutano pakurapa kwezvirwere zvakasiyana siyana.
Kune akawanda marudzi ekofi kofi zvigadzirwa, senge ivhu, simbi isina simbi, bone china uye zvichingodaro. Denga uye ivhu zvese zvakapetwa uye zvinopiswa. Iko kuumbwa kwehari kune yakaoma uye zvishoma kupinza. Kana iyo glaze ikawa, chikamu ichocho chichava nyore kusvibiswa uye hachigone kushambidzwa; iyo porcelain ine yakanyatsogadzirwa uye haina kupinza mvura, uye zvirokwazvo mutengo unenge wakakwira zvakanyanya; Iyo pfupa china mukombe ine yakanaka kupisa kuchengetedza, iyo inogona kuchengetedza tembiricha yekofi mumukombe, asi mutengo wakanyanya zvakanyanya; iyo yakapetwa-isina-isina mukombe simbi mukombe ine yakanyanya kupisa kuputira, yakasimba uye haizopfeke, mutengo uri nani zvishoma kupfuura pfupa china kofi, asi hauna runako Bonde.
Kureruka kwemukombe wehari uye kutenderera kwemukombe wevhu kwakaratidza maitiro akasiyana ekofi.
Pottery Cup: Ine yakasimba kugadzirwa uye inokodzera yakadzika yakakangwa kofi ine yakasimba kuravira.
Porcelain mukombe: yakanyanya kuwanda, inogona kududzira kunhuhwirira kwakanaka kwekofi. Pakati pavo, bhonzo china kapu yekofi yakagadzirwa neyepamusoro-giredhi china ivhu uye yakasanganiswa neyemhuka pfupa yekudya ine mwenje magadzirirwo, yakapfava ruvara, yakakwira density uye yakanaka kupisa kupisa kuchengetedza, izvo zvinogona kuita kuti kofi iri mukapu idzikise tembiricha zvishoma zvishoma, uye ndiyo inonyanya kukwanisa kuratidza kunhuvira kwekofi Sarudzo huru.
Pashure: kofi mukombe matatu-chidimbu seti
Zvadaro: Yakagadzirwa ceramic kofi mukombe, kofi mug
Bamboo Kofi Tumbler
Kofi Tumbler Tsika
Girazi Kofi Tumbler
Iced Kofi Tumbler
Yakasungwa Kofi Tumbler
Simbi Kofi Tumbler
Tumbler Kofi Mug
Stainless simbi yemaruva mukombe ine chikero
Yakagadzirwa ceramic kofi mukombe, kofi mug
kofi mukombe matatu-chidimbu seti
tsika 304 kaviri-rukoko Stainless simbi uswa C ...
Stainless simbi isina chando Kofi Mug